Shabaabkii Ugu badnaa oo Baardheere gaaray | Gedoonline
Shabaabkii Ugu badnaa oo Baardheere gaaray	Added by Editor on July 12, 2012.Saved under Latest News	Baardheere(GMN)-Goob joogiyaal ku sugan Degmadda Baardheere ee Gobbolka Gedo ayaa sheegaya in halkaasi ay gaareen ciidamadii ugu badneyd oo Shabaab ah.
Ciidamaddani ayaa lagu soo waramayaa inay ka ruqaansadeen deegaano ka mid ah gobboladda Baay iyo Bakool.
Shabaabka gaaray Degmadda Baardheere ayaa waxa ay wateen gadiidka kuwa dagaalka.
Ciidamadda qaar ayaa lagu soo waramayaa inay ka yimaadeen dhinaca gobboladda Jubbooyinka.
Gobboladda Jubbooyinka Gedo, Baay iyo Bakool ayaa waxa ay ka mid yihiin meelaha ay ka jiraan xiisadaha coladeed.
Degmadda Baardheere iyo Buurdhuubo ayaa waxa ay ka mid yihiin Degmooyinka Shabaab ay kaga sugan yihiin Al-Shabaab.
Qoysas ku laabanaya Gobboladda Koonfurta
Jubbooyinka oo ciidamadii ugu badnaa soo gaaray
Duqeymo markale lagu garaacay Baardheere
Kenya Oo Duqeysay Degmada Baardheere
One Response to Shabaabkii Ugu badnaa oo Baardheere gaaray	faarax July 12, 2012 at 4:19 am	aad iyo aad baad warar sugan u gudbisaan.